Kooxda Manchester City oo ka soo jawaabtay dalabkii ay Arsenal ku doonaysay John Stones – Gool FM
(Manchester) 15 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay ku guuldareysatay dalab kasta oo ay ku heli laheyd daafaca Manchester City ee John Stones inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee bisha Janaayo.
Iyadoo dhawaan loo magacaabay Mikel Arteta inuu noqdo macallinka cusub ee kooxda ku ciyaarta garoonka Emirates haddana ninka reer Spain ayaa si dhaqsi ah u doonayaa inuu xoojiyo safka kooxdiisa qeybta labaad ee kal ciyaareedka hadda soconaya.
24-kii saac ee la soo dhaafay, tababaraha reer Spain ayaa la la xiriirinayaa inuu dib ula midoobo difaaca reer England ee John Stones, kaasoo ay soo wada shaqeeyeen muddadii uu ahaa caawiyaha kooxda Manchester City.
Si kastaba ha noqotee, Manchester Evening News ayaa sheegaysa in Tababaraha Man City ee Pep Guardiola uusan xiiseynaynin inuu kooxda ka diro Stones bishaan, maadaama dhibaatooyin dhanka difaaca ah ay kooxdiiisa la daalaa dhacayso kal ciyaareedkan.
Dhaawacyada iyo qaab ciyaareedka liita ee xiddiga heerka caalami ee dalka England ayaa dhalisay inuu inta badan iska waayo safka hore ee kooxda tan iyo bilowgii bishii Agoosto.
25-sano jirkan ayaa kaliya ku soo bilaawday sagaal kulan xilli uu sidoo kale badel ku soo galay labo kulan tartammada Premier League iyo Champions League taasi oo tilmaameysa in difaacan uusan ka mid ahayn safka hore ee kooxda Man City.
Yeelkeede, kooxda kubada cagta Arsenal ayaa ku qasbanaan doonta inay markale tijaabiyaan bartilmaameedka xiddig kale oo ay difaacooda ku soo xoojin karaan, maadaama hadda ay Sky Blue iska diiday inay ka iibiyaan John Stones.
Kooxaha Rajo FC iyo Dekedda oo galabta ku ballansan garoonka Eng Yariisow